Sikubonisa umxholo onomdla weMacBook Pro | IPhone iindaba
Njengoko uyazi, kukho intelekelelo enkulu malunga nokuba nge-WWDC 2016 iya kuqala ngoMvulo. Olona rumor ludumileyo malunga neMacBook Pro yinyani yokuba iya kubandakanya iscreen sokuthinta i-OLED kwindawo apho amaqhosha omsebenzi akhoyo ngoku. Inqaku elinomdla abalindeleyo abaninzi njengeyona nto intsha inomdla, kodwa ayizukuphela kwayo. Umyili uyile umxholo omkhulu weMacBook Pro kwaye sikubonisa yona ngokweenkcukacha ezinkulu. Ungaphoswa ziindaba zento enokuboniswa ngoMvulo olandelayo nge-WWDC 2016.
Omnye wemisebenzi ephambili yale strip intsha ye-OLED iya kuba kukubuyisela uninzi lweempawu ezibonisiweyo kwibar ephezulu ye-OS X (macOS ukusukela ngoMvulo). Uyilo luyinto entle, kuyo sinokubona umzekelo isilayida sokulawula ivolumu yomculoIswitshi yeWiFi, umhla kunye negama lomsebenzisi. Inyani yile yokuba kuya kuba kuhle ukuba neli thuba lokuyila. Nangona kunjalo, njengoko besesitshilo, ayisiyiyo kuphela inoveli kule MacBook Pro.
Kwiskrini, kubonakala ngathi iApple iya kuqhubeka nokugcina iphaneli yayo emnandi yeretina, ukuba inyani, njengomnini weMacBook Pro Retina kunye nokujonga okuphezulu kwezinye iimveliso, iphaneli yeApple inomdla. Nangona kunjalo lixesha lokutshintshela kwi-USB-C, kwaye kunjalo iMacBook Pro ayizukufumana iMagicSafe Njengonxibelelwano lokutshaja, siya kumgangatho omtsha we-USB, lixesha lokuba sithengise iipheripherali. Ngokufanayo, nakwimodeli ye-intshi ye-13, izithethi ziya kubekwa emacaleni njengakwimodeli enkulu ukuza kuthi ga ngoku. Ibhodi yezitshixo, kunokuba kungenjalo kungenjalo, ibandakanya indlela entsha yamabhabhathane eyaziswa yiApple ngeMacBook. Ukuza kuthi ga ngoku yile nto siyaziyo, kodwa ayisiyiyo kuphela kwento esiza kukuxelela yona.
Yonke into esiyaziyo ukuza kuthi ga ngoku malunga neMacBook Pro entsha
Uninzi belukhalela ukulungiswa okukhulu, enyanisweni, bekukho amahemuhemu okuba iMacBook Pro entsha iza kuthatha uhlobo lwangoku lwe-12-Macbook, Sithetha ngemodeli ye-ultra-slim yamandla asezantsi anayo iApple. Nangona kunjalo, kwakucacile ukuba eli thuba linokujongwa njengesixhobo esifunwa yiMacBook Pro, ukuze iqhubeke nokuthathelwa ingqalelo njenge- "Pro". Kwindawo encinci kangaka kunye nolawulo oluncinci lobushushu, bekungazukubakho ukwenza imisebenzi efunekayo kwisixhobo esiphathwayo kwezi mpawu. Kungenxa yesi sizathu ukuba kungabikho mntu ubheja kulungiso olubalulekileyo kuyilo. Enye yezona zinto zibalulekileyo iya kuba kukuncitshiswa kwehenjisi yescreen, eya kuyenza ukuba incinci, kunye nendawo yezithethi zestereo kumacala omabini, njengenguqulelo enkulu yeMacBook Pro Retina yangoku. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi ngokobungakanani kunye nezinto, kuncinci okanye akukho nto izakutshintsha.
Kwelinye icala, isiseko sangaphakathi sesixhobo siyatshintsha, ayizukufumana kuphela umtya omnandi we-OLED othatha indawo yamaqhosha omsebenzi, kodwa kwakhona, itrackpad iya kunyuka kakhulu ngokobungakanani, mhlawumbi ithiyori eya kuba cIyahambelana nePensile yeApple. Kwelinye icala, ikhibhodi iya kudityaniswa ngakumbi kodwa ibe luncedo ngakumbi, ukuhlengahlengisa itekhnoloji esele siyibonile kwi-12-intshi iMacBook, ikhibhodi emnandi engenayo ilaptop okwangoku kwintengiso.
Ngokubhekisele kwizixhobo zekhompyutha, sinokuthi asazi nto. Nangona inyathelo elisengqiqweni iya kuba kukuqhubela phambili Iiprosesa zesizukulwana sesithandathu se-Intel, esaziwa njengeSkylake. Ikhatshwa bubuncinci be-16 GB ye-RAM kwimodeli yokungena. Yintoni engabonakali imiselwe ukutshintsha yimodeli yokugcina eyi-128GB ye-SSD, njengoko imarike yedrive drive ingatshintshanga kangako.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Sikubonisa umxholo onomdla weMacBook Pro
Ngoku ungacaphula imiyalezo kuWhatsApp, ii-GIFs ezilandelayo